यसरी थाहा हुन्छ फोटोको विश्वसनीयता | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि यसरी थाहा हुन्छ फोटोको विश्वसनीयता
on: May 06, 2019 प्रविधि, समाचार
यसरी थाहा हुन्छ फोटोको विश्वसनीयता
फेसबुकमार्फत बढी भ्युअर तथा लाइक पाउन र सोही आधारमा पैसा कमाउन अचेल गलत तस्वीर प्रयोग गर्नेहरू बढेका छन् । कतिपयले कुनै अमुक केटीको तस्वीरसहित फेक आइडी बनाएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने गर्छन् । यस्तोमा सञ्चारकर्मीसमेत झुक्किएर साथी बन्छन् र त्यस्ता फेक पोस्ट शेयर गर्दा उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
कतिपयले खास ठाउँ वा फरक समयको र निश्चित उद्देश्यले सम्पादित फोटो शेयर गरेर नकारात्मक सन्देश फैलाउने गर्छन् । उदाहरणका लागि मलेशियामा नेपाली महिलाले ‘यस्तो समेत गर्न भ्याए’ भन्ने खालका तस्वीर भाइरल भइरहेका हुन्छन्, जुन साँचो हुँदैन । ‘आकाशमा भगवान् देखियो, लाइक र शेयर नगरे अनिष्ट हुने’ भन्दै तर्साउने खालका तस्वीर पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । फलानो ठाउँको मनै लोभ्याउने तस्वीर भन्दै अर्कै ठाउँको तस्वीर पोस्ट गरिएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । नजानेर वा नियतवश यस्ता फोटो शेयर गर्दा कानूनी झमेलामा परिन्छ ।
आफू बढी जानकार छु भन्ने देखाउन अथवा मन परेर वा अन्य कुनै कारणले यस्ता तस्वीर धेरै मानिसले शेयर गर्छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल यस्तै अनधिकृत रूपमा खोलिएका र झुटा साइटले भरिभराउ छन् । साइटको पेज भिजिट बढाउन पनि अतिरञ्जित गरिएका यस्ता तस्वीर शेयर गरिएको पाइन्छ । कतिपय बुजु्रकहरू पनि आफू पहिलो हुने दाउमा तथ्य परीक्षण नगरीकन र तस्वीरको वास्तविकतामा ध्यानै नदिई शेयर बटन थिचिहाल्छन् ।
वास्तवमा इन्टरनेट (खासगरी सामाजिक सञ्जाल)मा भएका सबै कुरा साँचो हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री लाइक/शेयर गर्न हतारिँदा समाजमा आफ्नो छवि गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा लाइक/शेयर गर्नुअघि तस्वीर वास्तविक हो वा गलत भन्ने थाहा पाउन के गर्ने त ?
१. फोटोको लिंक कपी गर्ने
फोटो वास्तविक वा झुटो हो भनेर थाहा पाउन शुरूमा फोटो कुनै वेबसाइटमा छ भने त्यो फोटोको लिंक कपी गर्ने । फोटोको लिंक कपी गर्न जुन फोटोको लिंक चाहिने हो, त्यसमा राइट क्लिक गर्ने । त्यसपछि खुल्ने बक्सको कपी इमेज यूआरएलमा क्लिक गर्ने । फेसबुकलगायत कतिपय सामाजिक सञ्जालमा भएको प्राइभेसी पोलिसीका कारण फोटोहरूको लिंक कपी गर्न नसकिए पनि फोटोको वास्तविकता थाहा पाउन सकिन्छ । यसैले यस्ता फोटोहरू डाउनलोड वा स्क्रिन शट गर्नुपर्छ ।
२. गुगल इमेजमा पेस्ट गर्ने
गुगल डट कममा गएर दाहिनेपट्टिको माथिल्लो भागमा रहेको इमेजमा क्लिक गर्ने र फोटो वा लिंक पेस्ट गर्ने । त्यसपछि फोटा अपलोड हुन्छ । त्यसपछि गुगल इमेजले त्योसँग सम्बन्धित पहिले प्रकाशित विवरण र फोटोहरू देखाउँछ । प्रकाशित मिति हेरेर वा जानकारी पढेर सो फोटोको वास्तविकता थाहा पाउन सकिन्छ ।